ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အံ့ဖွယ်တစ်ခုနှင့် အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရန် ထိုက်တန်မှု
ကုသရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်း၏ အဓိက ဖော်ဆောင်သူများမှ ဦးဆောင်ခြင်းဖြင့် ယခုအခါတွင် ကုသရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ကုသရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသို့ ခရီးသွားရုံမျှထက် ပိုမိုလာပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အနေဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် သင့်ဖုန်းကို ကိုင်လိုက်သည့် အချိန်မှ စတင်ပြီး လုံးဝ နေပြန်ကောင်းလာသည့်အခါတွင် ပြီးဆုံးသော ပြီးပြည့်စုံသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
မလေးရှားသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုများအတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိပ်တန်း ခရီးပန်းတိုင်များထဲမှ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်ရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းအားလုံးမှာ မလေးရှား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အံ့ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
မလေးရှား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် အံ့ဖွယ်တစ်ခု ဘာကြောင့် ဖြစ်သနည်း။ အကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေး၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ငွေကြေးတတ်နိုင်မှုကို အကောင်းဆုံး မျှခြေထားနိုင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
i. သာမန်ထက်သာလွန်သည့် အရည်အသွေး
မလေးရှားတွင် လုပ်ဆောင်သော သင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုထုံးများ ရရှိခြင်းသည် သင့်ကိုယ်သင့် ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ စောင့်ရှောက်မှုထဲတွင် ထားဖြင်း မည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများ၏ ပေါင်းစပ်ကွန်ရက်သည် သင်၏ ကုသမှုဆိုင်ရာ ပူပန်မှုများအပေါ်အခြေခံ၍ မှန်ကန်သော သူများနှင့် သင့်အား ချိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ii. နောက်တစ်ဆင့် ရရှိနိုင်မှု
နိုင်ငံခြားခရီးသွားခြင်းသည် ကုသရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းနှင့် အစုအစည်းဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများသည် မကြာခဏအားဖြင့် မြန်ဆန်စွာ အာရုံစိုက်ခြင်းလိုအပ်သောကြောင့် မလေးရှားသည် နိုင်ငံအတွင်း လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်မှုအတွက် စံပြနမူနာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ပျမ်းမျှ စောင့်ဆိုင်းကာလကို များစွာ လျော့ချခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုသရေး အထူးကုများသည် သင့်အား ကူညီရန် အမြဲတမ်း အဆင့်သင့် ဖြစ်နေပါသည်။
iii. အခြားသူများနှင့် မတူဘဲ စျေးနှုန်း သက်သာမှု
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် မလေးရှားသို့ လာရောက်သော ခရီးသွားများသည် အမေရိကန်ရှိ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ် ၆၅% မှ ၈၀% ထိ သက်သာနိုင်ပါသည်။ ပိုမကောင်းပါက ၎င်းကို ကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်အတွက် မြင့်မားသော စျေးနှုန်း-တန်ဖိုးအချိုးနှင့် တူညီသော အရည်အသွေးရှိသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
နိုင်ငံခြားတွင် ကုသခြင်းကို အိမ်မှာ နေထိုင်ရသကဲ့သို့ ဖြစ်စေသည်
ခရီးသွားတစ်ဦးအဖြစ် မလေးရှားတွင် ဆောင်ရွက်သော သင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှု ရရှိခြင်းသည် မည်သည်နှင့် တူညီသနည်း။ အဖြေ – အိမ်နှင့် ဝေးသော အိမ်တစ်အိမ်။ မလေးရှား၏ အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များဖြစ်သည့် သူနာပြုများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သမားတော်များနှင့် အခြားသူများသည် မခွဲစိတ်မှီမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် နေကောင်းသည်အထိ အဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်းတွင် သင်နှင့် သင့်အားအဖော်ပြုသူမိသားစုဝင်များနှင့်အတူ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရှိ မရေမတွက်နိုင်သော ဂုဏ်သတင်းကျော်စောသည့် ဟိုတယ်များသည်လည်း သင့်နေထိုင်ချိန်အတွင်း ပိုမို၍ သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေအောင် ပြုလုပ်ပေးရန် အဆင်သင့် ရှိပါသည်။
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိသည့် နေရာတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကုသမှုများကို ရယူခြင်းသည် တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေးဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်းစီသာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါသည်။​ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိအကျ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မရှာဖွေမီတွင် ရောဂါ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး လိုအပ်သော ကုသမှုများ ရရှိအောင် ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေး အတိုင်ပင်ခံများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံး ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုက်ရောက်ပါက သင်သည် တစ်မူထူးပြီး တစ်ဦးချင်းစီအတွက် လုပ်ဆောင်သော ကြိုဆိုမှုတစ်ခုဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကျန်းမာချမ်းသာရေးကို သေချာစေရန် ပုံမှန် ရက်ချိန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။
ကလေးရှားကို လူသိများစေသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှု ငါးရပ်
အောက်ပါတို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကျန်းမာရေး ခရီးသွားများမှ နောက်ပိုင်းတွင် အထူးတလည် ရှာဖွေတတ်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှု ငါးရပ် ဖြစ်ပါသည်။
i. မျိုးဆက်ပွား ကုထုံးများ
အာရှတိုက်၏ မျိုးဆက်ပွား ဗဟိုချက်မအဖြစ် မလေးရှားသည် သားအိမ်ပြင်ပ မျိုးပွားခြင်း (IVF) ကဲ့သို့သော အားထုတ်ပြီး အမှန်ဖြစ်လာသော အကူအညီသုံး မျိုးပွားနည်းပညာ (ART) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် နည်းပညာများဖြင့် အပြည့်အစုံ ထားရှိပါသည်။ မလေးရှားကိနိသတင်း၏ အစီရင်ခံစာအရ IVF လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောင်မြင်မှုနှုန်း ၅၅ မှ ၆၀ ရာနှုန်းအထိ ရှိပါသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူနာများကို ချွင်းချက်မရှိ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား သိစေလိုပါသည်။ “ တစ်ဦးစီ အာရုံစိုက်ပြီး သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကောင်း နားလည်တဲ့အတွက် ဘာသာစကားကလည်း ဘယ်တော့မှ အတားအဆီးတစ်ရပ် မဟုတ်ပါ” လို့ တရုတ်ပြည်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်ပွား လူနာများထဲမှ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ii. ကင်ဆာ ကုထုံးများ
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကင်ဆင်ကုထုံးနှင့် စစ်ဆေးခြင်း နည်းပညာများ အချို့ကို တပ်ဆင်ထားပြီး မလေးရှားသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း ကင်ဆာ ကုသမှုများကို ခံယူလိုသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားများကို ကြိုဆိုရန် အစဉ်အမြဲ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါသည်။
iii. နှလုံးရောဂါဆိုင်ရာ ကုထုံးများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အာရှတိုက်၏ နှလုံးရောဂါကုဗဟိုချက်မဖြစ်လာစေရန် အားထုတ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးဆောင်သည်မှာ မလေးရှား၏ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ရှားကာ နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော နှလုံးစင်တာ ဖြစ်သည့် အင်စတိကျု ဂျန်တန် နီဂါရာ (IJN) ဖြစ်ပါသည်။ “ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက နောက်ဆုံးပေါ်တွေဖြစ်ပြီး ဆေးရုံကိုလည်း ခေတ်မီ နည်းပညာတွေနဲ့ ပြည့်စုံစွာ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်” ဟု အင်ဒိုနီးရှားမှ နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးက ဆိုထားပါသည်။
iv. အရိုးဆိုင်ရာ ကုထုံးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော အရိုးအကြော ဆရာဝန်များသည် သင့်ဘဝတွင် ခက်ခဲသည့် အချိန်ကာလများကို ကျော်လွှားရာတွင် ကူညီပေးရန် အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ အရိုးခွဲစိတ်ကုသမှုများမှ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်မူထူးခြားသော မလေးရှား၏ ပျူငှာဧည့်ဝတ်ကျေမှုများနှင့် ပူးတွဲလျက် အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ‘စိတ်လှုပ်ရှား ကြောက်ရွံ့တာကို ကျော်လွန်ပြီး ကျွန်တော့်ဟာ ကောင်းမွန်စွာ စောင့်ရှောက်ကုသခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိခဲ့ပါတယ်’ ဟု ကျွန်ုပ်တို့၏ အရိုးကုလူနာတစ်ဦးမှ တစ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပါသည်။
v. အလှအပ ကုထုံးများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်များသည် သင့်အိပ်မက်ကို အမှန်တကယ် ဖြစ်လာအောင် ပြောင်းလဲပေးရန် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။ စိတ်ချပါ။ မလေးရှားရှိ အလှအပေရေးရာ ကျွမ်းကျင်များကို မလေးရှားဆေးပညာကောင်စီ (MMC)၊ နှစ်စဉ် လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလွှာ (ACP) နှင့် ကျင့်သုံးရန် လိုင်စင်နှင့် အရည်အချင်း (LCP) မှ ကုသရန် ခွင့်ပြုထားပြီး အတည်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကုသရန် လာရောက်ပါ ကုသရန် နေထိုင်ပါ
မလေးရှားတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုများသည် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သင်နှင့် သင့်အဖော်မိသားစုဝင်များသည် အားဖြည့်အနားယူရန် မလေးရှားမှ ပေးစွမ်းသည်များဖြင့် မွေ့လျော်နိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ဆေးကုသရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားခြင်းသည် ယခုအချိန်ကလောက်ထိ ဘယ်အခါမှ မကောင်းခဲ့ဖူးပါ။